Baolina lavalava – « Mondial 2019» :: Tafita amin’ny ampahefa-dalana i Pays de Galles sy Aostralia • AoRaha
Baolina lavalava – « Mondial 2019» Tafita amin’ny ampahefa-dalana i Pays de Galles sy Aostralia
Taorian’i Angletera sy Frantsa, izay efa nahazo ny tapakilan’ny ampahefa-dalan’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ho an’ny taranja baolina lavalava, tantera- hina any Japana, dia tafita ihany koa i Pays de Galles sy Aostralia.
Ny fandresena azon’ity tompondakan’ny « Six nations 2019» ity nanoloana an’i Fidji tamin’ny isa 29 noho 17, omaly, no nahafantarana ireo solontenan’ny vondrona D ho any amin’ity dingan’ny ampahefa-dalana ity.
Hotanterahina amin’ny 19 sy 20 oktobra ho avy izao ireo dingan’ny ampahefa-dalana, raha amin’ny 26 sy 27 oktobra kosa no hanaovana ny dingan’ny manasa-dalana. Hofaranana amin’ny 2 novam­bra ho avy izao ity fifanina­na­na hiadiana ny ho tompondaka maneran-tany ity.
Vondrona A : ady telo
Mbola hiadian’i Japana, Irlandy ary Ekôsy ny tapakila roa hisoloana tena an’ity vondrona ity. Miankina amin’ny lalao hotanterahina amin’ny sabotsy sy alahady ho avy izao izany. Hifanandrina amin’izany i Irlandy sy Samoa, arahin’ny fifandonana eo amin’i Japana sy Ekôsy. Efa naman’ny mangoron’entana kosa ny ekipan’i Samoa (5 isa) sy Rosia (0 isa), izay mitana ny laharana fahefatra sy faha­dimy eo amin’ity vondrona A ity.
Vondrona B: Nouvelle-Zélande # Italia
Miankina amin’ny lalaon’ i Nouvelle Zélande sy Italia, izay mitana ny laharana faharoa sy fahatelo eo amin’ ny vondrona B no hahafantarana ireo solontena roa hiatrika ny ampahefa-dalana amin’izy ireo sy Afrika Atsimo. Ara-taratasy dia mbola manja­vozavo ny anaran’ireo firenena roa hiatrika an’ity dingana ity. Mila mandresy amin’ny alalan’ ny fahazoana “bonus offensif” i Italia vao afaka manantena ny ho any amin’ io dingana io. Efa naman’ny tafita kosa i Afrika Atsimo, izay ekipa afrikana hany afaka manohy ny fifanina­nana taorian’ny tsy nahazoan’i Namibia fandresena mihitsy tamin’ireo lalao telo efa vitany.
Vondrona C: mpandresy nihintsana
Na dia tafavoaka ho mpan­dresy tamin’ny isa 47 noho 17 teo anatrehan’i Etazonia aza i Arzantina, ekipa fahefatra nahatonga
ny “Tri nations”, ho “Four Nations”, dia tsy ampy ho azy ireo hoentina miatrika ny ampahefa-dalana ny isa 11 azony tamin’ireo lalao efatra efa vita. Ady laharana voalohany eo amin’ity vondrona C ity no hotontosain’i Angletera sy Frantsa, amin’ny sabotsy ho avy izao. Mitarika vonjimaika amin’ny isa 15 ny Anglisy, raha isa 13 kosa ny an’ny Frantsay.
Vondrona D: Ady lohany
Amina lalao roa no hamaritra izay ho laharana voalohany sy faharoa eo amin’ny vondrona D. Ho­tanterahina, rahampitso, ny
fifandonana eo amin’i Aostralia sy Georgie, raha amin’ny alahady ho avy izao kosa no hifandona i Pays de Galles sy Uruguay. Samy ekipa efa mihintsana avokoa ireo hifanandrina amin’ireto solontenan’ny vondrona D ho any amin’ny ampahefa-dalana ireto.
Baolina kitra – Amboaran’ny CAF :: Hifandona amin’ny RS Berkane Maraoka ny Fosa Juniors